Yonke insimu ifuna ukulinda isivuno ngokushesha. Ukuze enze lokhu, uzama ukutshala izinhlobo eziningana zezamatamatisi esiqhingini sakhe . Ngokujwayelekile akuzona ezinkulu kunazo zonke, kodwa yini engaba mnandi ngaphezu kweyotamatisi yokuqala emibhedeni yabo? Phakathi kwezinhlobo ezihlukahlukene zembewu kuningi utamatisi ezinhlobonhlobo zakuqala. Kodwa kukhona phakathi kwabo amagama amadala, aqinisekisiwe, ajwayele ukuba abalimi beloli abanolwazi. Enye yezinhlobonhlobo ezinhle zolu hlobo yi-agate "agate".
Izithelo zalezi zinhlobonhlobo ziqala ukuvuthwa ngosuku lwe-98 emva kokuvela. Kuze kube usuku lwama-120 kusukela manje cishe bonke sebekulungele ukuvuna. Ukubuya okunjalo okuvuthiwe kokuvuna kuyakwazisa bonke abalimi abakhula utamatisi "agate".
Ukubuyekezwa, ukubonisa izithombe: izithelo zenziwe, zenziwe kancane, zibushelelezi. Umbala wabo ubomvu. Ubukhulu buphakathi. On shayela ngalinye 3-6 utamatisi akhiwa. Cishe zonke ziyingayizi efanayo. Isisindo esisodwa - kusuka ku-80 kuya ku-100 amagremu. Utamatisi awugudluki esihlahleni, azinqamuki, yiziphi abathengi abakwazi ukukusiza.
Utamatisi "i-agate" ingahlonywa ngempumelelo ezindaweni ezincane. Ezindaweni eziseningizimu nasendaweni ephakathi, lokhu kwenziwa endaweni evulekile. Kubalimi abakhetha izithombo zokugcina ezincane, i-agate i-tomate nayo iyofanelana.
Izinhlobonhlobo zakuqala utamatisi zivuthwe ngaphambi kokuba ziqale ukuthinteka yisifo esiyinhloko samatamatisi - ukulimala okuphuzile. Lokhu futhi kuyigugu eliyigugu lezotamatisi elithi "agate". Imibono yabalimi ithi ayikulimazi ngalesi sifo. Nakuba incazelo yezinhlobonhlobo ibonisa ukumelana okujwayelekile kokulimaza okuphelile futhi ukubola kwe-vertex.
Izinhlobonhlobo ziyi-determinant, okungukuthi, emfushane. Ukuphakama kwehlathi kuvela ngamamitha angu-33 kuya kwangu-45. Izitshalo zalolu hlobo ziyeka ukukhula kwazo ngemuva kokwakhiwa kwezibhamu ezine noma ezinhlanu, okuzobe zakha izithelo. Ibhulashi lokuqala lenziwa ngemuva kwekhasi lesihlanu. Lokhu okulandelayo kuhlanganiswa wonke amashidi amabili.
Ukukhula okuphansi kwezinhlobonhlobo kwenza kube lula ukuthola isitshalo ngisho nangomlimi wezitshalo oqalayo ongajwayele ubuchwepheshe be pasynkovaniya. Phela, akudingeki kwenziwe nge-tomate ekhulayo "agate". Ukubuyekezwa, izithombe zabalimi beloli, nokho, kukhombisa ukuthi ngezinye izikhathi bangena ku-utamatisi walezi ezihlukahlukene. Ngakho-ke, bavikela isitshalo ekungeneni ukutheleleka nge phytophthora. Ngemuva kwalokho, abaningi bakhumbula unyaka lapho cishe yonke isivuno sezotamatisi sithuthuka izinsuku eziningana kule sifo. Ngemuva kokukhipha ama-stepsons, abalimi banda ukuvuthwa kwehlathi, okubangela ekukhiqizeni izithelo ezinempilo.
Futhi lezi zikhwebu (izingane zokutholwa) zingafakwa emanzini okwesikhashana futhi maduzane uthole isithombo esisha. Ama-stepsons azoqala izimpande, angatshala emhlabathini. Ukuvuna nabo kuzoqoqwa kamuva kunokuba "umzali". Le ndlela ingasetshenziswa uma izithombo zingesinye isizathu esanele.
Utamatisi "i-agate" ayikwazi ukubopha, ngoba ayiphezulu. Kodwa lo mkhiqizo awunamatheli, ngakho-ke i-garter ngeke ikulimaze. Ngokuphambene nalokho, kuzothuthukisa ukubhekwa okuningi kwezithelo. Kusukela lokhu, i-agate "i-agate" iyothuthuka ngokwengeziwe. Ukubuyekezwa, izithombe zamalimi abalimi bathi ezitshalweni ezingaxhunyiwe, ibhulashi elincane livame ukubola. Ukuze ugweme lokhu, udinga ukubeka into ngaphansi kwayo ukuze ugweme ukuxhumana nomhlabathi.
Ukunambitheka kwezithelo kubalwa ngabachwepheshe abavela ku-3.8 kuya ku-5 amaphuzu. Abalimi abaningi beloli bafana ne-tomate "agate". Ukubuyekezwa kwamanye abathengi kubonisa ukunambitheka kunomuncu kwezithelo zawo. Iningi liyavuma ukuthi liyinyama, hhayi amanzi. Okuqukethwe kwama-solids ekubunjweni kwawo ku-5%.
Utamatisi "i-agate" inikeza imiphumela emihle yokukhula okungenambewu. Ukuze wenze lokhu, hlwala imbewu ezinqoleni ezimbili noma ezintathu emigodini. Khona-ke ukudluliselwa kususiwe.
Ukuthuthwa okuphezulu kwaziswe ekuchazeni utamatisi "Agata" ("Aelita"). Ukubuyekeza kwamakhasimende kusikisela ukuthi lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Kunezinhlobonhlobo eziningi ezifanele ukuhamba. Kungaphetha ngokuthi ukuthuthwa kwezinhlobonhlobo kuvamile.
Abanye abakhiqizi bezinhlanzi ze-agate bathi kusukela emitha yemitha eyodwa yensimu bangaqoqwa kusuka ku-6 kg kuya kweziyisikhombisa zezithelo. Nakuba eminye imithombo idinga imingcele emincane kakhulu - kusuka ku-2 kuya ku-kilogram. Kuncike ezimweni zokulima nokunakekelwa.
Uma ikhulile ezindaweni ezinkulu ngezindlela zezimboni, izitshalo ziqala kusuka ku-580 kuya ku-670 abaphakathi kwehektha ngalinye, okufakazela lezi zibalo ezingenhla.
Ungathenga izinhlobo zembewu ezivela kubakhiqizi abahlukahlukene, isibonelo utamatisi "agate" ("Aelita"). Ubufakazi bubonisa izinga labo eliphezulu. Zilungiselelwe kahle, zihlume kahle. Akubizi. Okungalungile ukuthi abathengi bacabangela inani elincane lembewu e-sachet.
Imbewu ye-agate nayo ikhiqizwa nguGavrish, Elitsort, i-Sortsemovoshch.
Imbewu ihlwanyelwa phakathi kukaMashi. Kudingeka balungele lokhu. Okokuqala, amahora amathathu atshisa kuhhavini ekushiseni kwama-degrees angu-60. Khona-ke, imizuzu engamashumi amabili, cwilisa isisombululo se-potassium permanganate ukuze uphilise i-disinfect. Ngemuva kwalokho, faka isisombululo se-biostimulator ("Epin", "Ideal"). Ungasebenzisa isisombululo se-microelements kunalokho. Izitshalo ezilungiselelwe zibekwa esihlabathini, zangcolisa ngaphambili. Hlala ekushiseni kwama-degrees angu-23 kuya ku-25 kuze kube yilapho kuqala ku-proklyutsya. Ngemuva kwalokho, kanzima, ufaka esiqandisini, lapho abamba khona izinsuku ezintathu ekushiseni kwama-3 kuya ku-5 degrees.
Ukulungele ngale ndlela imbewu ayesabi ukushisa noma kubanda. Bahlwanyelwa ebhokisini elilungiselelwe ngenhlabathi. Ukuphakama kwalo akufanele kube ngaphansi kuka-10 cm. Ukujula kwe-seeding kuyigamu lesentimitha. Emanzi ngamanzi, ukumboza ngilazi noma ifilimu nendawo endaweni efudumele, lapho izinga lokushisa ligcinwa khona ngama degree angu-25. Zizohluma cishe ngesonto.
Ngemuva kokubukeka kwenqwaba yamahlumela, ibhokisi livuliwe futhi lifakwe endaweni ekhanyayo. Ukushisa kungancishiswa okwesikhashana kuya kuma-degree angu-16. Izinsuku zokuqala zidinga ukukhanyiswa ngezibani ezungeze iwashi. Kube sekuqinisekisiwe ukuthi izithombo zikhanyiswa okungenani amahora angu-12. Uma kungekho ukukhanya okwanele, izitshalo zizokwelula futhi zinciphise. Bangakwazi ngisho nokuba yize.
Amanzi kufanele athengiswe ekamelweni lokushisa. Kodwa kuwufanelekile ngemuva kokuba i-leaflet yokuqala yangempela ibonakale. Ukuphuza okokuqala kanye ngesonto, ngemuva kokwakhiwa kweqabunga langempela lesihlanu - zonke izinsuku ezintathu.
Lapho izithombo zineziqabunga ezimbili zangempela, kufanele zihanjiswe kwenye enye isidlo: izingxenye ze-plastiki ezingamamitha angu-half, izimbiza ze-peat. Bheka ukuthi ukuphela komgogodla kuphulwa ngesikhathi esisodwa. Lokhu kunomthelela ekwakheni uhlelo lwempande olunamandla.
Emhlabathini, utamatisi atshalwe ekupheleni kukaJuni. Kodwa ngaphambi kokuba badinga ukucwiliswa emoyeni omusha. Uma kungenjalo, ilanga nomoya kungashisa izithombo ezingenakuzivikela ngosuku lokuqala emva kokutshala.
Lapho lesi sitshalo sesakhe amaqabunga ayisithupha, ibanga eliphakathi kokuncane, futhi kukhona i-brushes eyodwa noma amabili, i-agate utamatisi ilungele ukutshala.
Ama-gardeners amazwana ayelulekwa ukuba abheke ngokucophelela izithombo, ozithengayo e-bazaar. Manje, abanye abadabukisayo-balimi bayakhula izithombo ezidayiswa ngokuphoqelelwa emquba. Izitshalo ziba luhlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza, oluphakeme. Kodwa empeleni ngeke banikeze isivuno esifisa. Phela, izitshalo azizange zidlule izigaba ezidingekayo zokuthuthukiswa kwazo. Ngakho-ke, kungcono ukuthatha izithombo ezingekho amagatsha futhi aluhlaza, futhi uqaphele isitshalo, okuyinto esitshalweni esiqinile kunombala omnyama.
Ibanga phakathi kwezitshalo ezitshalwe kufanele libe okungenani ama-40 cm. Uma kunokwenzeka, ukwandise kube ngu-70 cm.
Ogorodniki babelane ngemibono yabo mayelana nenqubo yokulima utamatisi "agate".
Imbewu eminingi yezitshalo, hhayi ukuyihluma. Akusiluleka ukuhlwanyela izithombo kuqala. Uma ingahlali isikhathi eside, izitshalo ziqala ukuqhakaza ebhodweni. Ngakho-ke, bathola isignali ukuthi kuyadingeka ukuqedela inqubo ye-fruiting ngokushesha. Ishesha ukunikeza okungenani ukuvuna okuthile. Izitshalo ezivame ukwanda zilahla izithelo uma zifakelwa emhlabathini noma utamatisi obuthakathaka ebhulashi elingaphansi liphuza ukuthuthukiswa kwezintsha.
Impendulo yabathengi iphakamisa ukuthi i-agate utamatisi ingenye yezinhlobo ezinhle kakhulu zokuzalanisa.
Utamatisi "i-agate" iyindlela ehlukahlukene yokusetshenziswa kwendawo yonke. Kufanelekile ukusetshenziswa ngendlela entsha, ukupheka ama saladi. Utamatisi ungagcinwa, ngoba amancane futhi adlula ngokuphelele entanyeni ye-can. Kuwusizo ukulungisa ijusi utamatisi ebusika, ukugaya utamatisi "agate". Ukubukwa kuthiwa uma ungayibilisi futhi uyifake kuma-degree angu-70 futhi umboze ngesembozo sensimbi, bese ubusika unganambitha ukunambitheka kosawoti omusha, futhi wonke amavithamini ejusi azohlala.
A unamathisela utamatisi ubuye ulungiselelwe. Kodwa ngenxa yalokhu, ijusi lezotamatisi livezwa ekuchaseni isikhathi eside emazingeni okushisa, ngakho-ke, amavithamini angenakwenzeka ukuba agcinwe khona.
Ama-poppies aseCalifornia: incazelo, izici zokulima nokunakekelwa
Indlela yokufakelwa i-lily ekwindla: amathiphu kubalimi
I-Nasturtium: ukutshala nokunakekelwa. Funda ukuthi ukhule kanjani izimbali ezimangalisa!
Kuyini nokuphepha ukuphila esikoleni? Yohlelo cwaningo zokuphepha ukuphila esikoleni
Uwoyela isibhamu: yini ukusetshenziswa
Shade nokubekezelana engadini. Ampelnye umthunzi ukubekezelelana
Uma uphuza soda, uma ungakwazi ulahlekelwe isisindo ngesikhathi esifushane? Yiziphi izindlela ezingaphezu kwesisindo usebenzisa soda?
Ukudla futhi ewusizo umkhiqizo - unogwaja isibindi. Indlela lokhu ovela eceleni (izindlela ezintathu)
Louis-Philippe: INkosi Julayi ohlanga
"Ihhotela eBhabhiloni" - uchungechunge ukuze ubuke kalula